Kahortaga Khiyaanada (Barnaamijka Maraykanka ee Qorista Qaxootiga) - CORENav
Iska ilaali oo Ka warbixi Kiy
USRAP waxay kushaqaysaa deegaan amaan ah. Dhamaan shaqaaluhu waxay halkan ujoogaan inay kucaawiyaan waxayna aaminsanyihiin xuquuq loo simanyahay. Haddii lagugu xadgudbo sababo laxariira caqiidadaada, diintaada, jinsigaaga, ama dareenkaaga galmo, waxaad usheegi kartaa shaqaalaha USRAP. Waxaad xor utahay inaad lahadasho shaqaalaha kiiskaaga ama aad wax waydiiso kormeeraha (nin ama haweenay wuxuu yahayba) xili kasta. Waxkasta oo aad usheegto xubin kamid ah shaqaalaha waa mid si wayn loo xifdinaayo.
Dhamaan adeegyada nidaamka dib udajinta waa lacag la’aan. Manaba inta lagu jiro nidaamka qof kamid ah RSC, IOM, Wakaaladaha Dib udajinta, xarumaha caafimaadka, NGO yada, UNHCR, ama Dawlada Maraykanka kama codsan karo qarash adeeg kasta oo uu kuusameeyaba. Hadii qof kaadalbado lacag, uu kugu qasbo inaad codsi dirto, uu sheegto inuu kuu faragelin karo adiga ama dedejin karo codsigaaga ama uu kuwaydiisto asxaan galmo ama asxaan noocouu rabo, ama uu kuu hanjabo say noqotaba, fadlan usheeg RSC. Macluumaadka ku saabsan soo wargalinta dhaqan xumada ayaa lagu siinayaa inta lagu jiro waraysiga koobaad.